Mikana Yekutarisira MaIndia eUAE ✰✰✰✰✰ & Visa Akapihwa
Svika kuBanking Mabasa muDubai
Shandisa mikana yevaIndia muUAE
Yakachengeteka kuenda kuUAE
Basa Rakanaka KunevaIndia muUAE, senge inyowani, chiitiko chikuru kune Indian expats. Upfumi hweAU huri kukura nekukurumidza saka iko kunouya mikana yebasa. Kana iwe uri muIndia uye uchitsvaga basa, iyo nyika yeArabhu sarudzo yakanaka. Zviri nyore kuwana basa muIndia kupfuura zvaungafungidzira. Vanhu vazhinji vanonyara kugadzira kunyorwa kunze kwenyika nekuda kwemabasa uye kutya kusazivikanwa.
Munguva pfupi yapfuura, iyo yeIndia hurumende yakauya nematanho matsva kwete kungoita chete asi kubatsira kuchengetedza kuchengeteka kwevagari veko vachiri kushanda kune dzimwe nyika. Imwe yenzvimbo dzekutanga dzevashandi muUAE. Iyo inozivikanwa pasi rese senyika yemikana yevarairidzi muminda yese.
Kubva kutanga kwegore, maIndia anosungirwa kunyoresa panzvimbo yepamhepo inotungamirwa nehurumende zvisati zvaitika vanoenda kuAUA kunoshanda. Izvi zvinoshanda kune vasiri-ECR mapasipoti vanobata vari kufamba pamusoro peiyo basa. MaIndia mashoma kwazvo anoenda kuAFA kushanya kana kuzororo, vhiza riri nyore kuwana basa. Hurumende inoda chero mugari wemuIndia anofarira kutamira kuAU kuti apedzise maitiro ekunyoresa kwemaawa anenge 24 nguva isati yasimuka chaiyo. Icho chete chinangwa ndechekuchengetedza hutano uye zvido zve Vagari veIndia pavanoshanda kunze kwenyika.
Kuwana basa muUAE
UAE mukana wakaenzana wemushandirwi musika. Haufanire kunetseka nezvekwavo. Saizvozvo, nharaunda yeArabhu ane hukama hwepedyo nenyika yeIndia nekudaro kugadziriswa kwemapepa kuri nyore kana ukakodzera kuwana basa. Sezvakangoita vagari pasi rese, iwe unofanirwa kutsvakisisa zvakanyanya pamikana iripo uye kugadzira mafomu akakodzera anoenderana nezvaunofarira.
Zviri nyore muIndia kupfuura mamwe matunhu epasi nekuda kwe chirongwa chehurumende kubatsira vagari vane hunyanzvi uye vasina ruzivo kuti vawane basa mukati uye kunze kwenyika. Huwandu hweIndia huri pakati pezvakakura munyika. Nevakuru kugadzira chikamu chebasa rakakura kwazvo, vashoma kwazvo vea vane mabasa akagadzikana saka mari isingavimbike.
Ndine chokwadi chekuti munonzwisisa mamiriro ehupfumi muIndia maererano nevemari mari. Haisi chakavanzika kana kunyadzisa kuhurumende; Hurumende yeIndia yakabuda neushingi kubatsira vagari vayo kuwana basa kune dzimwe nyika kunzvimbo dzekutanga senge UAE. Ehe, izvi zvinokwidziridza GDP yenyika yavo yekuzvarwa. Iro zano nehurumende yenyika rinoita kuti zvive nyore kuti maIndia awane basa muUAE.
Zviri nyore kuita vhiza yevadzidzi kubva kuIndia kuenda kuAFA. Mari inobhadharwa nekufamba kwevadzidzi zvakare yakaderera. Izvo inovimbisa iwe nzvimbo muAFA. Chinangwa, mune chino kesi, ndechekuisa tsoka munyika. Iwe unogona kudzidza kwemakore 4 kana mwedzi mishoma sezvaunowana basa. Nenhamba yepamusoro yebasa muUAE, haugone kushaya basa; kungave kwakasarudzika kana kwenyanzvi zvichienderana nekwaniso yako.
Chikoro chedzidzo chipupu chekukubatsira iwe kuti uende kune nyika. Vazhinji vashandirwi muUSA vachakubatsira iwe kugadzirisa chitambi chebasa chenguva pfupi. Kana iwe uchikwanisa kuwana basa kwenguva yakareba, iyo mvumo inotambanudzwa uye ichipedzisira yave zvachose. Kuwana mugari wemuAU ibasa rakakura, asi iwe unofanirwa kuve nemoyo murefu uye kuwirirana nemabasa ako. Iwe unofanirwa kuwana kuvimba pamwe nevatorwa; kuvimba kwakakosha mutsika yevaArabhu.
Tsika yeIndia neyechiArabu ane zvakafanana saka kudyidzana kuri nyore pakati pemadzinza kunoumba miviri tsika. Iwe unofanirwa kutora mukana wehukama hwakatangwa hwakavakirwa pachinamato kuti uwane chero rudzi rwebasa. Unofanira iva akavhurika pfungwa kana uchitsvaga basa muUAE. Vazhinji vashandirwi vanotsvaga kutarisa, kuongorora, uye kusimba kuvimba uye kuvimba nemushandi vasati vapa mamwe mabasa uye kugovera matanho epakati eekambani. Izvi zvinoshanda mune zvese zvikamu zvebhizinesi.
Iva akavhurika nezvishuvo zvako, uye iwe unogona nyore kuwana kutumira kubva kushamwari kana hama yemumwe munhu anodzokera kuIndia. Kutamira kuAUA pane vhiza yevashandi haina kuoma, asi chekutanga, iwe unofanirwa kushanda pakutsvaga basa rakakodzera. Iwo mararamiro muArab world anoenderana neguta rauchasarudza kugara mariri.
Kunyange zvakadaro, iwe unofanirwa kuisa pfungwa dzako pakutanga pakuwana basa, uye vamwe vose vanotevera.
UAE mukuru mushandirwi; chero munhu angadaro tora mukana wekuenda kuDubai kunyangwe vhiki chete. Idunhu reArab riri kukurumidza kukura izvo zvinoreva mukana wakawanda webhizinesi nemabasa. Kana iwe uine chero hunyanzvi, iwe unogona kuwana yakakura mikana yebasa muDubai. Chikamu chemubairo muDubai zvakare chinonakidza; kunze kwaizvozvo, dzimba dzekubatira uye zvekushandisa hazvisati zvakakwira sedzimwe nyika dzepamberi pasi rese. Iko kusanganiswa kwehuwandu hwemafuta uye Tsika yechiArabhu inoita kuti ive nzvimbo yakanakisa yekuve maIndia nekuda kwekunzwisisa pakati peairi tsika.
Ndingawana basa here? - Mikana Yekutarisira maIndia muAFA?
Dubai ine yakaderera hunyanzvi taskforce uye inogara ichitsvaga vanhu vanokwanisa kuzadza chinzvimbo ichi. Madzishe akapfuma nekuda kwemafuta uye haana dambudziko rekubhadhara vashandi chero bedzi bhizinesi richimhanya sekufunga kwavo. Nyaya chete yekutsvaga basa mukati Dubai ndiko kubatanidzwa kwetsika. Madzinza eArabia akasimbira pane zvavanotenda uye angatsamwiswa kana ukaita neimwe nzira; nepo iwe usingakwanise kugovera kana kubvumidza zvavanotenda, ivo vanotarisira kuti iwe uite zvinoenderana nezvavanotenda. Kwakanaka kufunga uchifunga kuti uri munyika yavo kunyange vashoma kwazvo, ivo ndivo vashandirwi.
Kunyange zvichinetsa kune vanhu vazhinji vanotsvaga mabasa muDubai, MaIndia akaiswa zviri nani nekuda kwemusanganiswa wetsika. Chimiro chakasimba chechinamato ichi chinoita kuti zvive nyore kugara pamwechete. Hauzove nedambudziko semuIndia kuti uende pamwe chete nemaArabhu. Indian zvakare yakasimba pane yayo tsika, izvo zvakakosha kune maArabu. Ivo vane pfungwa yekurairwa kungofanana nemaIndia.
Ndicho chikonzero chiri pachena chekuti matunhu maviri aya ari padhuze. Kunzwisisa kwezvemagariro uye zvechitendero kunovaita shamwari refu. Dai iwe uri timu yevakabvunzurudzwa vane zvakafanana zvinodiwa pane hwaro hwekugona ngazi, unenge uine mukana pamusoro pevamwe nekuda kwewako hunhun. Kunyange izvi zvichigona kutsoropodzwa pamatanho akasiyana-siyana, vashandirwi veDubai vane zvido uye kodzero kwazviri.
Saka hongu, unogona kuwana nyore basa mu Dubai kana uri weIndia.
Ndinowana sei basa?
Mikana yacho haiperi, kusawirirana kuri mukuda kwako, asi iwe une basa rimwe chete, kukutsvaga chakakodzera basa. Sezvambotaurwa, Dubai ine mikana yakawanda yekushanda asi haisi yega yega basa inokodzera hunyanzvi hwako, ruzivo, kana zvaunofarira. Zvakare, iwe unofanirwa kuziva nzira dzinoshambadza mabasa akadai muDubai.
Kana iwe wakananga nezve zvaunofanirwa kuita uye uchida rimwe basa, ungangoda kutsvagisa mafemu epamusoro muDubai uye kana ari kuhaya. Iwe unogona kushinga nekutumira email inotonhora kushambadza hunyanzvi hwako. Izvi zvinogona kududzirwa sekusuwa kana chivimbo. Chero zvazvinoreva iwe zvaunoshandisa, iwe haungatadza kupotsa mukana webasa kana iwe ukaita zvakananga kutaurirana. Kutsanangura zvaunofarira uye basa chinangwa inzira iri nyore yekutsvaga basa muDubai apo Expo 2020 iri kuuya.
Dubai iri pakati pemaguta epamusoro ane internet yakagadzikana yekubatana. Iyo tekinoroji yehunyanzvi muDubai uye iyo yose yeAEE iri kukura zvakare nekukurumidza. Makambani mazhinji ari kushandisa madhijitari ekushandisa kana kubatanidza vatengi. Uchitarisa zvako kutsvaga kwebasa pamapuratifomu epamhepo kunogona kukuendesa nyore nyore kuDubai based firm. Iko kushambadzira neemaudhi madhijitari zvakare kunoita kuti zvive nyore kufadza waunoshandira. Kutaurirana naiye angangove mushandirwi muDubai kuburikidza neemail kana kuburikidza nemanairesi ari pawebhusaiti yavo kana vezvenhau vanobata zvinokanganisa kwavo kusarudza basa. MaArabu pano anofarira nezvehunyanzvi uye kuratidza kugona kwako kuchaita kuti vafunge sarudzo.
kubatsira kushanda ku Dubai
Senge muIndia, uyu uchave unochinja hupenyu mukana nekuti yenzvimbo dzakakwirira dzehupfumi muDubai. Hupenyu hwehupenyu hwakawedzerawo hwakaenzaniswa neIndia, asi mutengo unoramba uchiderera. Mitero yacho ine hushamwari; zvinoshandiswa kubhadharisa zvakaenzana; zvigadzirwa zvemagetsi uye mutengo unonakidza zvakare zvinodzorwa. Mwero wekubhadhara muDubai zvakare wakanaka sezvo uchienzaniswa nenzvimbo zhinji dzepasi.
Rangarira, iwe une mukana wakakura kana iwe uri muIndia. Hurumende yeIndia iri kutsigirawo kutsanya kugadziriswa kwemavisa emabasa kuDubai.
Mabasa muDhawai yeIndias muUAE - "Ruzivo runodzidzisa kwazvo". Iye zvino vatsvaki vemabasa vanobva kuIndia vanogona kunyorerazve purogiramu kune kambani yedu. Basa redu rekushandira basa rinonzi Dubai City Company iye zvino achishanda muUAE. Nezvo mupfungwa, timu yedu iri kubatsira vaIndia vanoenda kune imwe nyika kuwana basa muGulf region. Sekutsvaga kutsvaga basa kubva kuIndia. Unogona kushandisa sangano redu kuwana basa rairota muUAE. Kunyanya ku Dubai, Abu Dhabi uye Sharjah Cities. Kazhinji kutaura, boka redu rekugadzirira rinokwanisa kuita mamwe mabasa anofadza muDhair kuVaIndia. Uye mabasa edu HR anonyanya akazvitsaurirwa kune vanotsvaka basa reIndia. Iva nyika pamwe nekusimba kwedu ikozvino iri nyore kwazvo. Basa redu rakasununguka kune vashandi vatsva. Iwe unogona Kudzoka zvakarezve pasi uye tsvaga kurota basa muUAE. Kazhinji, maIndia vari nemikana yakawanda muDaily City.
Kana ndanyorera nekambani yako ndingadai ndakawana vimbiso yekuti mabasa anopa ichaitwa?. Mhinduro yedu ndiYea, chero bedzi iwe uchititumira yako application. Mumwe wevamiririri vedu anodzoka kwauri neruzivo uye ruzivo. Dzimwe nyaya isu tinoda kutaura newe pamusoro peSkype kana WhatsApp. Asi mushure mekushandisa, iwe unogona kutarisira basa muDubai kunge munhu weIndia.
Unogona here kupa mabasa muDhailand kubva kuIndia?
Ehe, kambani yedu inobatsira vashandi vekuIndia kutsvaga basa kuti vawane basa kuEmirates. Mumwe wevatariri vedu veHR anogara achibatsira kuwana a basa muDubai reIndia 12th inopfuura pamwe neDubai mabasa eIndia 10th vanopfuura vashandi. Saka, kazhinji kutaura, pane mukana mukuru neDubai City Company kwekutsvaga basa muUAE. Chinangwa chedu ndechekubatsira vashandi vanobva kuIndia kuti vave mumwe wevashandi vekunze mu Abu Dhabi kana Dubai.
Rutivi rwusina kunaka chete timu yedu rwunogara rwakatarisana nechakaomarara mukuita kwemaitiro. Izvi zvinofanirwa kuitwa parutivi rwako, uye unofanirwa kunge uri 100% chokwadi chekuti kunyorera kwako basa kunoitwa nekutarisisa kwakasimba kune ruzivo muDubai. Chikwata chedu chinogara chichiedza kusundidzira chikumbiro chako zvishoma kuti vakuise iwe asap uye pane iwo mubhadharo wakanyanya kunaka.
Kune nguva dzose mazinga emabasa anopa zvatinokwanisa kupa:
Chikamu chekupinda ( Vadzidzi Vangopedza Kudzidza ) Kwete isingasviki $ 3,000 kusvika $ 4,5000 pamwedzi.
Middle Management (3 kusvika kuC10 makore akawana) Pasingasviki $ 5,000 pamwedzi, zvimwe zviitiko kusvika $ 8,000 - $ 11,000 pamwedzi pasina bhonasi.
Senior Management inofanirwa kunge iinopfuura 8 makore ehunyanzvi hwebhizinesi muDubai bhizinesi, engineering kana timu maneja yakatarisana nezviitiko. Mari inowanikwa panguva ino yakawanda kupfuura $ 10,000 kusvika $ 25,000 pamwedzi.
Vakuru vakadzidza Directors, CFO, CEO anogona kutarisira zvimwe pane $ 25,000 pamwedzi. Asi nekuda kweaya mabasa anopa ndapota tizivise isu pachivande.
Nekudaro, kana iwe uchitarisa kupfuura izvo, uye iyo mibairo inzira yekudzikira iwe. Ndokumbira kuti uite chikumbiro chako nekambani yedu nekuti Dubai ine zvinhu zvese. Ipapo maneja wedu weHR anotarisa mumafaira ako uye akubatsire kukwidza bara nemubairo.
Ndinoda here kuti ndiwane vhiza kuti ndiwane basa muUAE?
Kwete, imwe yemakuru makuru nekambani yedu inokurumidza uye nyore kutamira mabasa. Saka, kazhinji kutaura, nekambani yedu iwe unogona kuwana tsamba yebasa iwe uchigara muIndia. Yakawanda ye Dubai jobs for Indians zvinogoneka online. Saka, mhinduro yako iri, kambani yedu inogona kukubatsira kuti uwane basa muUnited Arab Emirates. Imwe yezvikanganiso zvikuru iyo timu yedu yeHR inoona zuva rega rega ndeyekushaiwa ruzivo. Semuenzaniso, vanhu vekuIndia vanotsvaga basa pane vhiza yekushanya muAFA. Uye pane isingasviki maviri muzana mukana wekuti uyu kutsvaga basa ubudirire.
Saka, unowana basa sei kuDubai semuIndia munzvimbo yekufona ipapo? Zvakanaka, iyo chete nzira yekushandira muEmirates ndeye kungoita zvinhu zvese zvakarongeka. Chekutanga kunyorera mabasa, ipapo vashandirwi vanofanira kuburitsa vhiza uye obva abhururuka afuratwe anogona kuiswa bhuku uye kuuya pamusoro peEmirates nenzira yepamutemo.
Isa CV kuDubai City Company
Dzvanya Pasi iri 100% Guarantee!
Ndapota shandisaiwo kubatsira kubatsira vamwe kuwana basa mu Dubai
Mabasa muDubai - Middle East kutamiswa nhungamiro yeExpats
Basa Rakanaka KunevaIndia muUAE, sezviripo, chinhu chikuru. Zvisinei, kudzokera kuUnited Emirates kune huru asi panguva imwechete chisarudzo chakanakisisa. Dubai City isiri nzvimbo yakanakisisa iyo India inotsvaga. Mukutaura kwebasa kutsvaga vatsvaga kubva kuIndia kusvika kuA Dubai ndiyo ndiyo nzira yakanakisisa. Asi panguva imwe chete iwe paunosarudza kuenda kuDhaibha kana kuAdha Dhabi. Basa roga roga rinofanira kuongororwa zvakanyatsotarisirwa iwe usati waita tumira CV yako.
Mushure mokunge makanyatsocherechedza nezvemashoko emabasa emahofisi ehurumende yeUAE, tapota onai kuri webhusaiti yevashandi vewebsite. Kune rumwe rutivi, iwe unofanirwawo kuita nheyo yekuti nzvimbo yei mukana uyu haisi chiyeuchidzo chakaipa. Uyezve, iwe unogona kuwana maoko-pamusoro pekupa basa. Zvose zvinobva kuIndia inogona kuiswa kumabasa e Dubai. Hazvinei kuti chii chawakanzwa, kana iwe ita rako kutengesera kwebasa mu Dubai. Iwe zvechokwadi uchawedzera mukana wako wokuwana tsamba yebasa.
Chimwe chinhu chinokosha iwe unofanirwa kuziva pamusoro pemikana yebasa yevaIndia muUAE. Icho chiri kutevera makore muGulf nyika zvechokwadi chinounza basa idzva kubhodhi here? Semuyenzaniso, Expo 2020 basa uye Fifa World Cup muKatar iriwo mukana unokura muGCC. Saka zvinenge zvese zvese zvichange zvine mukana wega kuwana basa muGulf Countries.
How Jobs in Dubai yeIndia inogona kupiwa?
Chimwe chezvinhu zvakanaka izvo Dubai City Kambani inopa kune avo vavanoda mhinduro nekukurumidza. Boka redu rekuraira, kazhinji kutaura, kuve nemabasa kunopa mukati mevhiki nguva. Asi iyo yakareba nguva yatinobata yaive yakapfuura 6 mwedzi yenguva. Izvo zvese zvinoenderana nechiitiko chemumiriri. Uyezve, sangano redu rinogara richida kuve nechokwadi chekuti zvese zvinowanikwa uye zvinodiwa zvichapihwa sekukumbira kwevatengi.
Tiri kubatsira vanhu ku tsvaka basa mu Dubai. Muzvokwadi, isu tiri kubatsira ne visa uye kuwana basa rinowanikwa mukati meDhailand mazano. Kambani yedu inopa kuendesa mabasa ekutsvaga mabasa kuEmirates. Saka, vanhu vanobva kuIndia vanogona kuenda ku Dubai. Isu tiri pano kuti tinyatsoongorora tsvakurudzo yebasa rakadzika neAir Dubai, ruzivo rwemakambani emabasa eUAE. Dzokera pane izvozvo kuedza kuisa vateereri.
Mashoko iwayo achakubatsira iwe nekuda kwebasa rekushanda mukati meUAE. Isimba redu rinova rakakurumbira zvikuru rinongobva pamabasa atinenge tichipa basa rinoshamisa kumabasa e Dubai kuIndia.
Ndizvo izvi mupfungwa, vedu WhatsApp mobile phone recruitment system yakabatsira nzvimbo dzepasi rose muchengeti webasa zvikurukuru kubva kuIndia. Kuisa imwe nzira iyo maIndia vashandi vashandi muDhailand. Anovapa kunzwisisa kwakadzika mumabasa ekubhadhara musero. Nezvo mupfungwa mupfungwa muDhaibhi kukupa iwe kutendeukira kune hupenyu muMiddle East territory.
Basa Remikana yevaIndia Rinotsvaga muUAE
Kune nzvimbo dzakawanda uko maIndia anogona kuwana basa. Dubai City Kambani kunyora iyo blog neruzivo rwakadzama. Uye nzira yakangwara ndeye kushandisa webhusaiti webhusaiti kubatana nemamwe expats. Zvakare, kune nzira shoma shoma dzeku Indian expats dzakadai semapoka emabasa uye mukana wekukoka vamwe zvakare nekuwedzera yako pachako mharidzo inoshanda yeDubai.
Kune rumwe rutivi, unofanirawo kutarisa makambani ekubhadhara muUnited Emirates. Chimwe chezvinhu zvakanakisisa muUAE ndey Recruiter anonzi Careerjet uye Kambani inonyatsozivikanwa muIndia seMonster Gulf. Zvechokwadi zvakakosha kushandisa neCV yako. Vazhinji vanotsvaga 100,000 vari kunyoresa ipapo zuva rega rega, iwe unofanirwawo kutevera mutungamiri iwoyo.
Paunenge uchitsvaga mabasa mu Dubai uye Abu Dhabi. Iwe unofanirwa kuve nekutarisa kwedu mirayiridzo yevatorwa vanobva kunze kwenyika. Uyewo uye nguva dzose uchiva nechokwadi chekuti mabasa ako emuIndia anoenda nenzira yakarurama. Nemhaka yokuti Emirates haisi misika iri nyore kupinda kana iwe usingagoni kutungamirirwa zvakanaka uye Information.
Mabasa eIndia muUAE
Uchawana mazano anokosha kuvanhu vanobva kuIndia pamusoro basa vacancies mu Dubai. Semuenzaniso, iwe unofanirwa kuziva ruzivo rwakavanzika pamusimboti webhizimisi muMiddle East. Uyezve, iwe unofanirwa kuziva ruzivo rwekugara huripo uye nzira yekuwana basa muDhaibhi nokukurumidza kuburikidza nekushandisa nhare.
Nenzira imwechete yekwanisi uye ruzivo runobatsira pachikoro chevana vako. Pamwe pamwe nemabhandi ebhengi ezvinyorwa, uye zvinhu zvekuchengetedza zvakadai sekuzvidzivirira uye fitness. Usingareve kuti ruzivo rwakapiwa pane dzimwe nzvimbo harusi nyaya dzinobatsira. Iwe unofanira kushandisa chete best website for Dubai jobs.
Sezvakangoitika, kambani yedu inzira yakanakisisa yekushandisa nayo recruitment services uye mamwe makambani haatauri maitiro akadaro. Mukuwedzera, Dubai City Company inoita mazuva e60 pane mamwe mabasa anobhadharwa kubhadhara basa. Mune mamwe mazwi mumiririro wekambani yedu kubatsira India career seekers kune chokuita nekushandisa basa redu mu Dubai kune maIndia mabasa.
Iva nekutarisa paKubata Mikana YevaIndia muUAE
Kudzokera kuUnited Emirates Emirates ne Dubai City Company. Zvimwe zvinoshamisa uye zvakaitwa zvakanaka Middle East relocation guides iwe unogona kuwana pane yedu Dubai blog.
Izvi zvinoreva mumakore apfuura, semufananidzo, the United Arab Emirates job market rakashandurwa richibva kune imwe nzvimbo yakabuda kune imwe nzvimbo kuenda kune imwe nzvimbo yakasununguka uye yakasiyana-siyana yevashandi vakawanda vekuMadokero. Kuti uise imwe nzira, i Brazil inoumbwa neanomwe emirates, Abu Dhabi, Dubai, Ajman, Fujairah, Ras al-Khaimah, Sharjah uye Umm al-Quwain. Idzi mbiri mabhizinesi makuru eBud Dhabi uye Dubai inopa hupenyu hunoshamisa uye mikana yakanaka kwazvo yemabasa.
Nechinangwa ichi, United Arab Emirates is cosmopolitan, yekutanga nyika Nyika ine nhoroondo refu yekugadzikana kwezvematongerwo enyika uye zvemagariro weIndia. Mune tariro iyo kuti inozunza rakakura, rakadzidza zvikuru, rakawanda mitauro, rakasiyana-siyana rekushandira vadzidzisi vane unyanzvi kubva kuIndia, nekunakidzwa kukurukurirana mukati memunharaunda uye kune dzimwe nzvimbo dzemari. Uzhinji hunopupurira hunopikisa MaIndia muDhailand rine rekodhidziro yemakore anopfuura 30 ekubudisa mapurogiramu emabhizimisi ekuda kufanana nekombiyuta, kutengeserana, mitambo, kufamba, uye kuchengetedzwa kwekuchengetedza.
Sei uchienda kuA Dubai?
Pamusoro pezvakanaka, the Basa Rokuwana AmaIndia muUAE ane un-bureaucratic maitiro ebhizinesi, nemamwe emutero wepamusoro uye zvimwe zvinokurudzira zvemari chero kupi zvako munyika. Zvakare zvinofanirwa kurangarirwa kuti Dubai City ine mikana yepamusoro yebasa. Uye zvakanakisa zve kudzidzisa basa kumaIndia.
Kutaura kuti mararamiro akachengeteka evaIndia anoita kuti ive nzvimbo yakakurumbira yekuwana vatariri vebhizimisi uye mhuri dzavo. Vakawanda vevaIndia vanoenda kunyika vari kukurudzirwa nokukurumidza. Saka, zvakakodzera kuendesa ku Dubai.
Imwe pfungwa yakakosha: mukati meUAE iwe unokwanisa kusangana nekusiyana kwechokwadi pakati pevanhu vaunosangana navo kubva kuIndia. Mumamiriro ezvinhu akadaro, chete 11% yevagari ndeyenyika, inenge 21% ndeye maArabhu mukuita basa rekutamiswa International career seekers to Dubai. Kubva kune dzimwe nyika, 57% iri South South Asian uye 11% inosara ndeyokumabvazuva kweAsia neWesterners. Kubatana kwechokwadi kwemitauro, mitauro, uye zvitendero zviripo, uye zvichitsvaga kubva kunyika dzakasiyana-siyana dzinozadza unyanzvi hwezvigadziro pamatunhu ose.
Nokuda kwechikonzero ichi, tiri kuedza kuratidza iwe nzira ye new jobs in Dubai. Pamusana pemafungiro asina kunaka emazano edu ekutsvaga, kutsvaga kwebasa mu Dubai inotora nguva yakareba. Asi chinhu chokutanga chokuyeuka isu tichaedza kuita kuti zvive nyore kwauri. Nokudaro uchapupu hunokurudzira huchakubatsira iwe kubata nharembozha vacancies in Dubai. Ndiyo mhizha yehupfumi muDhailand.
Semuenzaniso, mikana yebasa yevaIndia muUAE uye kutsvaga basa muGomo. Icho chiroto chekuita navo. Ingo kujekesa chishandiso chakanyanya kuiswa muzinda weEmirate uri WhatsApp Groups muGulf uye yose yeUnited Emirates
Wadii kutamira kuAud Dhabi?
Pane mashoma mashoma nei uchifanira kutamira kuguta pane Abu Dhabi. Semuenzaniso muguta guru reEmirates rinogara richikura, zvibvumirano zvitsva zvinoiswa ipapo zuva rega rega. Semuenzaniso, kunyange Linkedin neFacebook vachangovhura hofisi ipapo. Pane rimwe divi, Abu Dhabi inzvimbo yakanaka kwazvo yevatariri vekutengesa mota, mainjiniya uye vashandi veOrange neRhasi. Saka, kazhinji kutaura, zvese zvinoenderana neruzivo uye chako chimiro.
Abu Dhabi guta rakanakira zvakanaka vanhu vakagadzikana. Iyo ine mhuri nedzimba dzevaridzi. Nekuti kune zvakawanda chiziviso park uye mashoma mhere. Iko kunogara kune mikana mitsva mu Abu Dhabi, asi inofanirwa kuyeukwa kuti guta iri rine chimiro uye mini-hurumende inoita parutivi rwebhizinesi. Kambani yedu inogara ichirayira maguta makuru nekuti iwo ndeayo yeramangwana careers akadai CEO uye CFO yebasa mikana.
Basa Rokuwana AmaIndia muUAE
Kuda mari muDha Dubai: Kune munhu ane simba anoda a basa mu Dubai. Nheyo yacho inowanzoregererwa kungoenda ndoga. Zvechokwadi, zvinoita kuti urarame pane zvakaderera zvakanyanya sehupenyu hwekushanda kwekambani ye6500AED. Kutaura nezvekufambisa mari yekubhadhara kare yakabhadharwa kuti iuye ku Dubai. Saka mune chiedza cheupenyu husina mari mu Dubai, iwe unofanirwa kuisa mari yekubhadhara ku Dubai Area kungofamba pane nguva kuenda kubasa rako. Kunyangwe nepetori yemotokari yako, motokari yemotokari, uye mari yekuchengetedza nemari yekuvandudza yemari yemotokari.
Zvakanaka kwazvo kusarudza kutanga basa rakakurumidza ndeku kutsvaga Cars job opportunities muUAE. Nebasa iri rekushanda, iwe uchava nemukana wekugamuchira motokari yakasununguka nekufambisa kune yako yebasa. Pamusoro pezvakanaka, iwe uchabhadhara chete peteri uye inshuwarisi.
Zvechokwadi, kune musiyano mukuru pakati peIndia nemamwe marudzi. Semuyenzaniso, Vashandi vaFiripio vakatamira ku Dubai. Uye ivo vari kurarama munzvimbo ino inoshamisa. Asi vazhinji vavo havasi kurarama semuIndia. Vari kuwana mubairo wakadzika. Uye vazhinji vavo havasi kuwana basa rakanaka uye mabasa ekutsvaga mabasa muUAE.
Isu tiri kubatsira zvidzidzo nemabasa ekutsvaga maIndia muUAE.
Nayo ine mutengo we anogara mu Dubai?
Dzimba dzimba mabhiri pamwe nemvura, magetsi, foni kuti tigone kutaura neshamwari, chokwadi, internet, uyezve chikafu, uye zvekudya zvinowedzera kana kana yekudyira nguva nenguva. Mukuwedzera, iwe unogona kuve pamwe nevemhuri / vanovimba navo vangada kuva newe muDubai. Zvakaringana pakushandisa kwaunoshandisa iwe unofanirwa kuwedzera kutenderedza AED 2000 yemunhu mumwe nemumwe muDubai. Kusarudzika kune dzimwe nyika, vashandi vevashandi vakajairika vanova vakachipa. Nekudaro, muchiedza chemubhadharo wakanaka kwazvo muDubai, unogona kuhaya musikana kuzo part-time jobs in Dubai kubva kune dzimwe nzvimbo Dubai makambani kana iwe uchida kuchengetedza imba yako yakachena.
Mikana yebasa yevaIndia muUAE ive inoshamisa mitsva sarudzo dzevatorwa. Saka zvisinei kuti ndeipi chinzvimbo chauri kutsvaga kuwana ikozvino. Dubai City kambani iri kushanda nesimba kuti ipe ruzivo rwakadzama. Zvakare, isu tiri kutonga blog yedu yevavhimi vekuAsia vavhimi uko vatsva vanogona kuwana ruzivo rwakakosha nezve dhizaini yeku Dubai naA Abu Dhabi.
basa rekuita Mikana ye MaIndia mu UAE
Ziva zvinodikanwa zvebasa muDhailand yeIndia!
Kunyangwe izvi zvingava zvechokwadi kwatiri kambani mu Dubai nongedza iyo nzira yakanakisisa yokubhadhara muUnited Emirates kumudzimai. Ukuwo, isu tiri kuedza kuwana hwaro hwehuwandu hwezvinzvimbo muDubai City. Uye isu tiri kushanda nguva dzose kudzidzisa mabasa muDubai uye IT jobs in Dubai. Saka zvakawanda zvatinoda kuti uwane mikana yebasa muDha Dubai tinoda kutarisira mapurogiramu evashandi waunoda.
Kune rimwe divi, Dubai City Company inogara ichiedza kuti uwane mwero wakakura wekuiswa kwe mikana yemabasa mu Dubai. Saka tiri kuedza kuisa zvakasiyana Kuchengetwa muDhailand uye nguva dzose kuchengeta India vashandi vanofara ne new emirates mabasa.
Kuwana mikana yebasa kuburikidza nevashandirwi
Chimwe chinhu chinokosha ndechokuti International Recruitment Agencies for expats ivo vanochengeta nguva dzose zvido zvinowanikwa nevanotsvaka basa muDhailand. Pane rimwe divi, Dubai City Kambani panzvimbo yekutambira kunze mabasa akawanda anopa. Nguva dzose vanobatanidza vashandi vemabasa kusvikira panguva ino neine zvakakosha zvevanhu vakadai seHomhunters, Agent Recruitment, uye HR kupa maneja.
Uyezve, zvakaoma kwazvo chero chiitiko pachena isu tiri kuvasvikira kuburikidza neakaunzi zvinyorwa kunyange kubva kuPakistan. Saka munzvimbo yekutanga, iwe unofanirwa kusvika zvakanakisa vashandi vekunyorera muDubai, kuti uite izvozvo, hongu, iGoogle iyo yeBasa muD Dubai uye edza ku tsvaga vashandi vepamusoro muDhaibha uye Abu Dhabi.
Sezvakangoitika, vashanduri vasingatongorori vashandi vanogara vari paGoogle for Jobs. Uyezve unogona kutsvaga kune dzimwe nyika recruitment agencies in mumbai, kana vatungamiri vemunharaunda muHyderabad avo vanofanirwa nehurumende dzeUAE dzinogona kukubatsira online jobs in Dubai. Mahofisi eAustralia anonyanya kuwanikwa mukuwana vanhu vane tarenda muIndia uye nevadzidzi vanoziva uye vachivaisa sekuenzanisira accountant mabasa mu Dubai kana chero ipi zvayo emirates jobs.
Nokukurumidza kana kuti gare gare iwe somutsvaga webasa muUAE. Zvechokwadi dzichanyatsofambisa kuburikidza nekurwa kwe a career in Emirates nemaprofayili akasiyana. Semuenzaniso, mabasa emahotera muDubai inzira yakanaka. Panguva ino, iwe unofanirawo kurwira kuchengetedza mabasa muDubai vakagovana nekambani yedu pane LinkedIn. Uye nekufamba kwenguva driver drivers in Dubai nokuti zviri nyore kwazvo kuwana. Zvadaro svinura avo vanotarisira kubvunzurudza uye teererai mabvunzurudzo akawanda. Dubai basa rokuhaya mamaneja muUnited Arab Emirates anogara achitsvaga vanhu vatsva kubva kuIndia. Zviripachena kuti vapedze uye ivo vari nyore kuwana muDubai uye nguva dzose Kugadzirira kushanda nesimba muhoro unoshamisa.
Ok, kutanga, iwe unobva kuIndia uye zvizhinji zvezvinhu zvinobva kuAsia zvakarongeka. Zvakagadziriswa zvinyorwa-zvinyorwa zviduku zvakanyatsojeka, zvechokwadi tarenda, uye zvakaenzanirana nevamwe vanoita zvinhu vachifunga. Tinoita zvakawanda kupinda muzvikoro kubva kuIndia ku Dubai. Sezviri nyaya yedu yakasimba iyo nguva dzose inonyatsoziva kuti tinounza mugumisiro wakazonaka wekushandira pamwe nevatengi vedu kubva kuAsia. Zvisingatauri kuti kwatiri isu zvakakosha zvakafanana ndeyekuvhara mu nhamba yakasarudzwa yeDaily city nzvimbo dzisinganzwisisiki 60 kusvika ku 90 mazuva ezuva. Muzvokwadi, kambani yedu muUAE nguva dzose ichiedza nzvimbo India inotsvaka basa uye inotsvaga chete nokuda kwemabasa ekupedzisira ku Dubai.
Nei Maitiro muDhaibhi kuMuIndia achizivikanwa zvakadaro?
Tanga Basa uye uwane kubudirira kukuru muUAE
Dubai ndeye nevanotsvaga mabasa epasi rese senzvimbo yepamusoro yekubudirira yekutsiva mune yebasa muchidimbu chemabasa muUAE. Neichi chikonzero mwedzi wega wega machinda mazhinji kubva kuIndia inouya kuzotengesa mabasa muDhailand. Nokuti zvakakosha kuona kuti zvakagadzirwa nemari nzvimbo zvinogona kukubatsira kuti uwane mari muUnited Emirates.
Pasi pemamiriro ezvinhu aya, Dubai inova imwe yemaguta akapfuma uye akapfuma munyika yose. Kazhinji kutaura mabasa mu Dubai kuIndia uko vazhinji veAsia vari kurarama upenyu hwehupfumi. Sezvakataurwa pawakashanyira UAE ndiyo nyika yakazara nevanhu vakapfuma.
Panguva imwecheteyo kana iwe uchizoziva kwaunogona kurova iwe unogona kugoverwa nyore nyore mabasa mu Dubai kuti uwane zvishoma. Uye pakupedzisira, iwe uchanamatira kune huwandu hwakawanda hwehupfumi hunokwanisa kukubatsira iwe iyo Dubai basa search.
Munguva pfupi kana gare gare apo iwe uchange uri mubatidziro uyo pakupedzisira akawana basa panzvimbo iyo iwe uchatanga kurarama hupenyu hwehupfumi. Chero bedzi Dubai guta inobata chikwata chikuru chemagetsi. Nenguva iyo kutsvaga kunosanganisira mabhuku akanaka kune a mukana webasa. Dzimwe nguva hotera penthouse uye nzvimbo dzekutengesa semabasa aripo muUAE.
Zvadaro basa mune rimwe guta uye iwe unogona kuitika. Munharaunda, nzvimbo ino inoshamisa inobvumwa zvakare seimwe yezvinhu zvakanakisa zvekutenga kune mudzimai wako munyika. Iwe uchaziva kuti paunosvika ipapo uye iwe unotanga kuita mari. Saka, pakati pekutsvaga a basa muAud Dhabi uye Dubai regai tive neziso pahupenyu uye basa rinowanika kuMiddle East.
Mabasa muUAE yeIndia uye hapana anoona vashandi?
Munhu wose anotarisira basa munzvimbo yekutanga anofunga mupfungwa mu Dubai. Sezvazviri, panewo Abu Dhabi apo iwe semutsvaga webasa unofanira kugunzva. Zvose Indian muUAE ndezvekutendeseka kutsvaga shanduko yemabasa. Saka panguva imwe chete Usauya nekuda kwekuvhima basa muUnited Emirates pavakashanyira visa. Muzvokwadi, vazhinji veIndia vakaudza kuti vachawana basa pakushanyira visa. I7th Emirates iri kutsvaga rudzi rwemabasa, kubva kune vanoona vashandi kusvika kune vatungamiri.
Nzira iri nyore yekuwana basa muDubai ndeye kutanga padanho rakaderera. Nekuti manejimendi mabasa anopa haana kushambadzirwa iyo yakawanda muAFA. Mazhinji eanonyatso kuzivikanwa anozivikanwa haana kushambadzirwa ayo mabasa anopa. Iko kupa uye nekukurumidza nzira yevasina ruzivo vanhu yekuwana yakaderera-mabasa.
Nechinangwa chekutsvaga basa mukati DUBAI CITY: VaIndia vauya kuUAE. Uye kunyanya vachitsvaka mabasa emahotera kuMiddle East, kwete chete Emirates. Usambofa wakafanirwa kuuya pakushanyira visa pamusoro pezvose. Nezvo izvi mupfungwa, munhu wese wekuIndia anoshandira basa anofanira kutendesa basa raanoita pakushanda visa ku Dubai. Base pane izvozvo vanhu vanobva kuIndia vachiuya mune tariro yokuti mvumo yevisa ichapiwa nebazi rekushandira. Chimwe chinhu, ita zvakanaka uye usati wasvika munyika uedze kuwana visa yekushanda muUAE. Kuti iise imwe nzira, kunyange hurumende yeIndia muEmirates yakati kune kuwedzera kwenhamba yekubata itsva mutsvaga wekutsvaga basa rose uye zvirongwa zvekunyengera zvakanyanya kwazvo.
Basa iri mu Dubai neVisa yeIndia
Semuenzaniso, mu 2018 Gov zano rinotevera nhamba yakakwirira yezvinotengesa visa. Uye kazhinji kutaura, kudana uye kushanyira kuti maIndia ave vakavhiringidzika pakupedzisira kwekuipa kutsvaga kwemabasa. Chero zviitiko zvose, Asia vanhu vari kutsvaka basa vanofanira kutaura nehurumende. Nokuti pane dzakawanda zvizhinji Vashandi veIndia avo vakave vachifambisa nyika dzakawanda nemabasa ekushanda kana vashandi nguva dzose. Mukufamba kwenguva vashandi veAsia havawani basa kana mubairo havana kubhadharwa kwavari.
Kusvikira panguva ino, UAE ine dambudziko guru Visa yeIndia. Nenguva nenguva vaitsvaga basa kubva kuMumbai vakavimbiswa mamwe mabasa akanaka ekutengeserana mabasa muBud Dhabi uye kamwe kamwe havana chavakawana. Asi mushure mekuuya kwekutsvaga kwekushanda kwakaudzwa kuti vashande sevashandi vehuwandu hwemaripo pane imwe nzvimbo yekuvaka uye ipapo akawedzera kuti aizoita mari yakawanda muIndia. Unogonawo kubatanidza mapoka emabasa edu Pakistani vashandi muDhailand kungova nechiratidzo chakajeka. Mamwe mamwe marudzi anotarisira mikana yemabasa. Kunyange nzira yekuwana basa muSaudi Arabia uye zvimwe zvakawanda nemashoko uye mazano ekupa mazano.
Kusvikira panguva ino muhafu yekutanga ye2017, hurumende yeIndia yakagamuchira mushumo kubva kuUAE. Kutaura kuti pakupedzisira kuongororwa kwekunyunyuta kwebasa re 540 kubva kuIndia vanhu kwakagadziriswa muUAE uye vakawana basa muBud Dhabi kana Dubai City. Pamusoro pezvakanaka, mushumo wakataura izvozvo Asia expat vashandi muUAE vanofara chaizvo pavanowana zvakabhadharwa zvakanaka basa mubhizinesi rebhangi ku Dubai kana India.
Mabasa ekubhadhara zvakanakisisa muDaily City?
Chimwe chinhu chinonyanya kukosha chatinoda kujekesa newe ndeyeMabasa akanaka-kubhadhara muDaily City uye Basa Rakanaka KunevaIndia muUAE. Rudzi urwu rwebasa runopfuura kuzivikanwa !. CFO uye CEO webasa mikana achiri kuvhurika kune vatorwa vekuAsia. Saka, kana iwe uine ruzivo rwakanaka uye zvakanaka dzidzo ine yakakwirira dhigirii mwero.
Dubai City Company kuongororwa kwemisha muDhaibhi uye Abhi Dhabi vanosvika zvinopfuura mazita emabasa e300. Munyaya iyi, mashizha makuru muUAE ndiyo yakanakisisa yekuwana basa. Uye kazhinji kutaura, iwe unofanirwa kuziva kuti ndeipi basa raunenge uchibhadhara zvikuru uye edza kuva itsva dream dream candidate from South Africa. Pasi pemamiriro ezvinhu aya, pane zvakawanda zvekufunga nezvekufunga nezvazvo. Paunosarudza kutanga gwaro rekurota muUAE.
Kubata hanya kukuru kwaunofanira tarisa pane pane nyaya yekudzikira mubairo basa-hupenyu hwesiyero kuti ndinogona kutsvaga mumwe mukana. Padivi risiri iro chinhu chirevo chebasa chinoshandurwa kana kutaridzika zvakanaka kwandiri? Izvo zvinopa basa rakanaka rekukura kutarisira uye mukana wekuti zvirinani-zvisina mutero mari? Kana kuti zvinoita kuti ndiwane mari yakawanda iripo here ?. Saka tarisa Basa Remikana yevaIndia muUAE neGulf uye chii iro rakanakisisa basa rinosarudzwa.
Mikana yepamusoro yebasa muDhaibha yeIndia
Iyo yakanakisisa yeChina Chief Executive Officers Career mu Dubai
Avhareji pamwedzi kuripa mune chiedza chepensheni inoshamisa: Dh120,000
Pamwe pamwe nemari yeruzhinji: Dh65,000 kuDh145,000
Semhaka yekuti, nyanzvi dzekutengesa dzakakoshawo kushanda
Kutaura zvisinganzwisisiki pamwedzi wepamwedzi kubhadhara kusanganisira penheyo: Dh85,000
Kusiyana-siyana Mharairi yepamusoro: Dh60,000 kuDh100,000
Kusiyanisa pamusoro pekuverenga mabhizimisi uye vashandi vebasa rezvemari muUAE
Pamwe chete nemamwe mabasa akanakisa uye zvakafanana kune mamwe average average pay inosanganisira pension: Dh75,000
Kusiyana-siyana Mharairi yepamusoro: Dh55,000 kuDh90,000
Kuwedzera kune mabhengi makuru pamwe chete nevhareji yemwedzi pamari kubhadhara penheji: Dh70,000
A ane izvi mupfungwa ivo vane mubare wezvikamu: Dh53,750 kuDh99,500
Yakabatana nekushamisa bonus kubhadhara Vatongi vanoita basa mu Dubai
Uyezve, basa rakaoma chaizvo kuti uende muUAE seIndia uye kuenzanisa pamwedzi pamwedzi kubhadhara penheyo: Dh67,000
Kusiyana-siyana Mharairi yepamusoro: Dh60,000 kuDh116,000
Basa rakaoma kutanga, asi kupa yakawanda mikana
Vasingatauri vanachiremba basa muUnited Emirates
Avhareji yemwedzi pamari kusanganisira penheyo: Dh70,460
Pamwe pamwe chete top-rated Gulf jobs Chiremba Murairo wezera: Dh70,000 kuDh220,000
Mubhadharo unobatsira Nyanzvi dzeukama hwehutachiona hwemaurotori, tisingarevi mazita emagetsi evanhu vane simba uye masimba emagetsi, zvakaenzana nevana vepfungwa dzepfungwa / vepfungwa dzepfungwa uye vanovhiya vemazamu.
Wagadzirira here kubva kuIndia kusvika kuA Dubai?
Kune anopfuura 600,000 vanyoreri vatsva pane yedu database. Zuva nezuva mabasa matsva muDubai for Indian expats iri kuyerera kune yedu webhusaiti. Kambani yedu kuva nevazhinji vateveri vatsva vanofara uye vatsva vekutsvaga basa kwete chete kubva kuIndia. Nekuti tiri kutenda kuti munhu wese anofanira kuva ne mukana wekuratidza wemusika wakanyanya kwazvo munyika.
Takavaka imwe mhando yekambani yekubhadhara ku Dubai. Kusvikira panguva ino, takabatsira kune vanopfuura 1,400,000 vashanyi vanobva kuIndia. Sezvakamboonekwa nekuda kwemashumiro atinenge takasununguka apo anokufananidza iwe kunyanya, mazuva ose e7 pavhiki. Mukufamba kwenguva, iwe unogona kupinda mukambani yedu yekutsvaga pasina kusangana.
Panguva imwe chete, unogona kufamba ne Kushanda nenyaya yekutsvaga basa. Kazhinji kutaura nezvebasa rekutsvaga muIndia isu takanyanya kunaka pane zvatinoita. Chaizvoizvo, mukupedzisira kuongorora. takamirira mumiriri wako muUnited Arab Emirates. Zvirokwazvo unogona kuwana ruzivo rwakakosha kubva kune dzimwe nhengo dzako. Iwe unogona kuenda kune iyo Nhengo chikamu uye unobatana nezviuru zvevakadzingwa.
Shanda mu CEO chinzvimbo se Indian expat
Unoziva here kuti kune vakawanda Indian expat CEO kushanda ku Emirates? Semuenzaniso, Google jobs mu Dubai ikozvino inowanika kune International career seekers. Saka, somuenzaniso, mikana mitsva yemabasa yevaIndia muUAE ndiyo yakazaruka. Indian expats inogamuchirwa muEmirates. Uye masangano makuru ari kubhadhara zuva nezuva vanhu vatsva vanobva kuIndia.
Chimwe chiitiko chekugara kwemahofisi ekufambisa kune vanoenda kuAsia ndivo WhatsApp. Mune kambani iyi, vashandi vatsva veAsia vari kushanda nepamusoro-soro hwezviitiko, kunyanya muIt departments. Kunyanya kukosha kuti uone ndiko kambani yedu inobhadhara paNesApp. Saka kana iwe uchinge uine pfungwa yakanaka yeiyo chiitiko iwe unogona kuwana basa neDubai City Company. Padivi rakashata, isu hatipe CEO kana nzvimbo yepamusoro yekutungamira nekuti takatotora ma maneja makuru mubhizinesi.
Mikana Yekutarisira MaIndia eAUE - Ndezvako muDubai.
Iye zvino inguva yekupedzisa inokosha chaizvo kutsvaga basa muAud Dhabi kana Dubai ?.
Zvakakosha chaizvo kuwana basa mu Dubai semuIndia?
Sezvinobvumwa Dubai, ichi ndicho chikuru kushambadza paTV. Ikozvino a akawanda emapurojekiti matsva anouya kunzvimbo yeGulf. Zvakare, Saudi Arabia ikozvino yaita zvimwe zvinorambidzwa maIndia anoshandira Makambani eSaudi. Qatar kune rumwe rutivi, isingambopa chero chinhu chinopfuura 2-3 makore zvibvumirano. Saka, sekusarudzika kwekuchenjera kambani yedu inopa zano Emirates. Kune anopfuura 30,000 mabasa matsva anowedzerwa kune anoverengeka mabasa portals chete kune vashandi vatsva muguta guru reEmirates.
Rumwe ruzivo rwunofanira kukugombedzera kuti uwane basa muDubai huwandu hwevaIndia muUAE. Kune anopfuura mamirioni mashoma akanyoreswa maIndia akadzingwa muDubai uye Abu Dhabi. Izvi zvinofanirwa kukupa iwe zvishoma kwevimbiso nesarudzo yako. Nekuti kana mamirioni avanhu akakwanisa kuwana hupenyu hwakanaka muAAE. Iwe unofanirwa zvakare kuzviona sewe munhu akakosha pabasa rakanaka.
Ne Dubai City Company unogona kugara uine chokwadi chekuti paunoshandisa pamusoro pehutano hwevanhu. Iwe uchave wakanyatsoiswa uye mikana yebasa yevaIndia muUAE nguva dzose ichawanikwa uye inotarisirwa neHR team.
Mhedziso yemuIndia wese uyo kutsvaga basa kuDubai
Isu tiri kufunga kuti pamwe chete nezvikamu zvose zvemashoko une ruzivo rwakanyanya pamusoro pei kushambadzira basa in Emirates. Saka, senhau, iwe unobva kuIndia uye uchitsvaka basa mu Dubai inokosha kuziva kuti kusvika kune muchengeti hazvisi chinhu chakaoma kuita.
Nezvakanaka, tiri pano kuzokubatsira, isu tiri kutarisira a WhatsApp Groups for jobs seekers. Linkedin kugadziriswa nevatengi vemasimenhe system, zvakasiyana-siyana zvekutsvaga zvakare zvakare ku Dubai sarudzo. Nekufunga izvi kuwana basa kubva kuIndia kuenda kuUnited Emirates kunofanira kuva nyore nyore.
Kubva pa Dubai City Company chiitiko. Semufananidzo wemabasa uye basa rinotsvaga kuMiddle East, tine kuisa mihoro muArabic mazano, kuongororwa, uye mamwe mazano ekuwana kuwana basa muUAE kana iwe uri weIndia.
Kuti tiise imwe nzira, tinoedza kuisa zvese kubva kuIndia nekuita kuti vave vashandi vakanaka muUnited Emirates. Kazhinji kutaura, nguva dzose tsvakai mabasa ne MBA uye chengetedza kutsvaga kwako mubhuku kana laptop kana mukasa wako wekushandisa achiedza kudana iwe nebasa raunopa.
Isu tiri kuve netariro yekuona munhu mutsva wechiIndia achifamba mumukurumbira wehupenyu hwakanakisisa uye chiroto chechiArabic. Isu tinongova chete tariro ichava iwe!. Ndinokushuwira rombo rakanaka uye tariro kuti unoita application yako neDubai Company.